Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Ruushka wuxuu ku dari doonaa Module Dalxiis Saldhigeeda Hawada ee xiga
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska Hawada • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Madaxa Shirkadda Hawada Sare ee Ruushka (Roscosmos) Dmitry Rogozin
Roscosmos kuma lug yeelan doonto duullimaadyada dhulka hoostiisa mara, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan hawada sare ee Ruushka, laakiin wakaaladda hawada ee Ruushku waxay ku lug yeelan doontaa horumarinta dalxiiska hawada iyada oo qayb ka ah barnaamijka tijaabada ah ee maraakiibta.
Waajibka Ruushka ee ka -qaybgalka barnaamijka ISS wuxuu dhammaan doonaa dhammaadka 2025 -ka.
Bishii Abriil, 2021, Prsident Ruushku wuxuu oggolaaday qorshayaal loogu talagalay Saldhigga Adeegga Orbital -ka cusub ee Ruushka.
Madaxa hawada ee Ruushka ayaa soo jeedinaya in la abuuro module saldhig boos oo gooni ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha.
Saraakiisha wakaaladda hawada sare ee Ruushku waxay soo jeediyeen in lagu dhiso moobiil gaar ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha Saldhigga Adeegga Orbital-ka Ruushka ee la soo jeediyay (ROSS), beddelka Moscow-maalgelisay ee Saldhigga Caalamiga ah ee Duugga ah ee gaboobay (ISS).
Ruushku wuxuu ku dari doonaa moduleka dalxiiska saldhigiisa xiga
Sida uu sheegay madaxa Shirkadda Hawada Sare ee Ruushka (Roscosmos) Dmitry Rogozin, Golaha Sayniska iyo Farsamada ee Roscosmos ayaa kulankooda 31 -kii Luulyo kaga dooday abuurista ROSS.
"Waxaan soo jeediyay in mashruucu uu ku jiro abuurista modul gooni ah oo loogu talagalay dadka soo booqda," ayuu yiri madaxa Roscosmos.
Iyada oo waajibaadka Ruushka ee ka -qaybgalka barnaamijka ISS uu dhammaanayo 2025, waxaa muddo dheer la isla dhexmarayay mustaqbalka saldhigga keliya ee meeraha ee meeraha.
Bishii Abriil, 2021, Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu oggolaaday qorshayaasha Saldhigga Adeegga Orbital -ka cusub ee Ruushka, isaga oo saxiixay soo jeedin saldhig -bannaan oo leh saddex illaa toddoba qaybood.
Haddii go'aanka la gaaro in lagu daro qayb si gaar ah loogu talagalay dalxiisayaasha, waxay sii ahaan doontaa dhaqankii ka -qaybgalka Ruushka ee dalxiiska hawada. Sannadkii 2001, injineer Mareykan ah Dennis Tito ayaa noqday dalxiiskii ugu horreeyay ee meel bannaan oo maalgeliya safarkiisa ku aaddan meel bannaan, isagoo yimid gantaalkii Soyuz TM-32 ee Ruushka.